AddEvent: Ku dar Adeegga Kalandarka ee shabakadaha iyo joornaalada | Martech Zone
Waqtiyada qaarkood, inta badan waa howlaha ugu fudud ee sababa kuwa horumariya webka madax xanuunka ugu weyn. Mid ka mid ah kuwan waa kuwa fudud Ku dar Calendar badhanka aad ka hesho boggag aad u tiro badan oo ka shaqeeya barnaamijyada jadwalka muhiimka ah ee khadka tooska ah iyo barnaamijyada desktop-ka.
Xikmadooda aan dhamaadka lahayn, dhufaysyada isku dhafan ee muhiimka ahi waligood kuma heshiin heerka caadiga ah ee loogu qaybinayo faahfaahinta dhacdada; taas awgeed, jadwal kasta oo weyn wuxuu leeyahay qaab u gaar ah. Apple iyo Microsoft ayaa korsaday .ics faylasha qaab ahaan file feylal qoraal ah oo cad oo faahfaahinta ku jirta. Google, adeeg ahaan khadka tooska ah, waxay adeegsataa API-keeda si ay ugu shaqeyso macluumaadka dhacdada.
Waa maxay Qaabka ICS
Isku-darka Isku-dhafka iyo Jadwalka Qeexitaanka Waxyaabaha Muhiimka ah ee Internetku waa nooc warbaahineed oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay kaydsadaan oo ay is-weydaarsadaan isku-darka kala-goynta iyo jadwalka xogta sida dhacdooyinka, to-dos, gelitaanka joornaalka, iyo macluumaadka bilaashka / mashquulka ah. Faylasha loo qaabeeyey si waafaqsan faahfaahinta badanaa waxay leeyihiin kordhin .ics ah.
Ku dar waa adeeg yar oo weyn oo soo saara nambarka iyo faylasha lagama maarmaanka u ah in lagu daro ama la qoro Kalandarrada Apple, jadwalka tooska ah ee Google, Outlook, Outlook.com, iyo Yahoo! jadwalka taariikhda. AddEvent waxay bixisaa labada qalab ee khadka tooska ah iyo sidoo kale API si loo habeeyo iskuxirayaashaada Ku dar Kalandarka iyo badhamada sikastoo aad uhesho
Ikhtiyaariyada Ku darista iyo Qalabyada ay Ku jiraan
Ku dar Khadka Calendar (loogu talagalay boggaga internetka) - hab deg deg ah oo aan dadaal lahayn oo loogu talagalay isticmaaleyaashaada inay ku daraan dhacdooyinkaaga kalandarka. Si fudud loo rakibo, luuqad-madaxbannaan, soonaha waqtiga, iyo DST oo iswaafajinaya. Waxay si buuxda ugu shaqeysaa dhammaan daalacashada casriga ah, kiniiniyada, iyo qalabka moobiilka.
Kalandarka rukunka (dhacdooyin badan) - si fudud ugu dar dhacdooyin badan jadwalka taariikhda isticmaalahaaga adoo iska diiwaangelinaya jadwalka aad abuurtay. Xitaa waxaad ku sameyn kartaa isbedel jadwalkaaga, oo isbeddelkaas ayaa ka muuqan doona dhammaan kalandarradayaasha macaamiishaada.
Events (loogu talagalay joornaalada iyo wadaagista bulshada) - u oggolow dadka isticmaala inay ku daraan dhacdooyinkaaga jadwalkooda iyada oo aan loo eegin meesha ay ka baranayaan iyaga - ha noqoto joornaalada, warbaahinta bulshada sida Facebook ama Twitter, ama qalabka ololaha sida MailChimp, Marketo, ama Salesforce. Qalabka dhacdo ee AddEvent ayaa kaa dhigaya mid deg deg ah oo aan xanuun lahayn adiga inaad ku abuurto dhacdo bog kuu gaar ah oo degitaan ah oo aad markaa la wadaagi karto warbaahinta bulshada, ama u adeegsan karto isku xirka joornaalada iyo aaladaha ololaha.
Habka Tooska ah ee URL (iyo API's) - xiriiriye la habeyn karo oo loo isticmaali karo in lagu abuuro dhacdo duulimaad ah, ama u dir isticmaaleyaashaada adeegyadooda kalandarka halkaasoo ay ku dari karaan munaasabaddaada, ama xitaa ku dheji munaasabaddaada emayl aad u dirto isticmaaleyaashaada .
Waa barxad yar oo adag, fudud, oo waxtar leh oo run ahaantii ka caawisa diiwaangeliyaashaada iyo kuwa kula shaqeeya ganacsiga. Haddii aad dhiseysid barxad oo aad ubaahantahay waxqabad ku daris-jadwalka ama haddii aad kaliya tahay ganacsi qaybinaya xusuusin dhacdo qof walba, AddEvent waa barxad weyn. Waxay sidoo kale bixiyaan:
CalendarX - jadwalka la duugi karo, kalandarka rukunka, iyo adeegga xog ururinta dhammaantood hal baa loo wada rogay. Sida jadwalka la duugi karo, waxay dhacdooyinkaaga ka dhigeysaa mid muuqaal saaxiibtinimo u leh isticmaaleyaashaada adoo siinaya jadwal dhab ah oo ay ku eegaan boggaaga. Kalandarka rukunka, waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaashaada inay si fudud ugu darto dhacdooyinkaaga jadwaladooda oo ay la socdaan wixii isbeddel dhacdo ah (oo la mid ah aaladda Kalandarka Macaamiil, in kasta oo ay jiraan xulashooyin iyo falanqeyn qoto dheer).
Analytics - La soco bandhigyada, dhacdo-ku dar, macaamiisha kalandarka iyo inbadan. Falanqaynta waxay bixisaa xog qiimo leh oo ku saabsan adiga kalandarka iyo dhacdooyinka lagu abuuray Dashboardka ama Kalandarka & Dhacdooyinka API.
Isku day AddEvent si bilaash ah
Tags: ku dar jadwalkaku dar isku xidhka kalandarkaku dhejinkalandarka tufaaxakalandarka APIrukunka kalandarkakalandarka Xjadwalka ladiidi karodhacdo degitaanka boggaiskuxirka dhacdadajadwalka googlemailchimpsuuqojadwalka aragtidajadwalka outlook.comiibinkalandarka rukunkakalandarka yahoo